Amateur Radio - Network maRadio
musha / Amateur Radio
Isu tinofara kuzivisa yakazara vhidhiyo ongororo yeiyo Bhokisi chip S700A - Iyo DMR / Analog hybrid transceiver, ine Android OS uye inokwanisa 4G / LTE. Inowanikwa muVHF uye UHF shanduro.
Iyi vhidhiyo yekuongorora inoratidza iyo UHF modhi.
Iwe uchada redhiyo uye isu takagadzirira dhisikaundi kwauri. Kana iwe ukashandisa promo kodhi HRCDMR on buda iwe uchave uine imwezve dhisikaundi uye yemahara kutumira, zvisinei iwe kwaunogara.
Vhidhiyo na HamRadioConcepts
Odha yako Boxchip S700A Izvozvi
Uri mutsva muNetwork maRadio here?
Iwe ungade here kuteerera kune epamoyo kutaurirana paZello usati waenda mukutenga mamwe ma network mawairesi?
Heano epamutemo Network Radios chiteshi:
Ndokumbira uve nechokwadi chekuti yako Bhokisi chip S700A ine bhatiri inokwana kugona pakutanga.
1 chidimbu cheType-C USB tambo uye komputa ine Windows 7 kana pamusoro inodikanwa. Iyo .Net Sisitimu vhezheni haifanirwe kunge iri yakaderera pane 4.0.
kuisa BPS yekuisa package kune chero kwaunoda.
1.2 Gonesa USB Debugging
Tinoda kugonesa USB Debugging mune yako kifaa nekuda kweBPS kuverenga uye kunyora mafaira ekugadzirisa kuburikidza neUSB. Tinogona kuigonesa kutevera aya matanho:
a) Simba pane mudziyo;
b) Sarudza "Zvirongwa-> Nezvefoni";
c) Dzvanya "Inovaka nhamba" 3 nguva nekukurumidza uye iwe uchaona tip;
d) Dzokera "Zvirongwa", pane "Sarudzo dzekuvandudza" chinhu chemenyu pamusoro "Nezve foni";
e) Sarudza "Sarudzo dzekuvandudza" uye wochinjisa "Ziva" iyo;
f) Dhonza pasi kusvikira "USB Debugging" woigonesa;
g) Batanidza chishandiso nekombuta neType-C USB tambo. Unogona kuona chigunwe cheminwe chinosimbisa kekutanga, cheki uye ubvume.
1.3 Bvisa Yakare Shanduro Shanduko
Vhura mudziyo kubva ku "My Computer" mu desktop, Cheka iyo yekare vhezheni yekugadzirisa mafaira kana paine - iyo yekare vhezheni yekugadzirisa mafaira inofanira kunge iri munzira "S700A \_ Yemukati Yekuchengetedza \_ CONTACTLIST.xls" uye "S700A \_ Yemukati Yekuchengetedza \_ PTT_CHANNEL_LIST_DATA.xls" , unogona kuchengeta aya mafaera maviri kucomputer disk.
1.4 Isa Nyowani Shanduro APK
Kopa "DMR_V014_sign.apk" ku "S700A \_ Yemukati Yekuchengetedza \_" uye isa iyo, ipapo tinogona kuronga mudziyo.
2.1 Sarudza Mudziyo
Kazhinji, BPS inozoona wosarudza chishandiso otomatiki kana iwe uchivhura se pazasi pe skrini. Asi ndokumbirawo uzive kuti BPS haitsigire akawanda-mahedhi izvozvi.
Solution yeBPS haina kuona chishandiso, pamwe haufanire kuedza nhanho dzese:
a) Ita shuwa "USB Debugging" inogoneswa;
b) Plug-dhonza USB tambo yakati wandei;
c) Tangazve mudziyo wako;
d) Tangazve komputa yako;
e) Isa "adbdriver.zip" mukombuta yako;
f) Pakupedzisira teedzera "adb_usb.ini" ku "C: \_ Vashandisi \_ Zita Rako \_ .Android \_".
2.2 Verenga Kugadziriswa
Dzvanya bhatani girini kuti uverenge kugadzirisa kubva pachigadzirwa, iwe uchaona "Model Number" uye "Serial Number" yakazadzwa sezasi.
Kekutanga nguva iwe yaunowana kuverenga kuverenga nekuda kwekuti hapana nyowani yekugadzirisa mune mudziyo, edza kuinyora ipapo
kuverenga kunenge kuri OK.
2.3 Nyora Kugadziriswa
Gadzirisa zvese parameter, wobva wadzvanya bhatani dzvuku kuti unyore zvakajairika mune chako chishandiso.
Iwe une mawairesi akawandisa. Zvirinani kubhadhara nemari! Kana chete mukana wekuhwina mahara redhiyo!
Iri gwaro rinokurumidza rinotsanangura maitiro ekuronga mafirita eDMR muBoxchip S700A
Kutanga, ndapota verenga "S700A DMR Mushandisi Chinyorwa”Kuziva maitiro ekuisa frequency yeDMR.
Wobva waisa iyo chaiyo ruzivo mu PTT Channel runyorwa & rwekubatana runyorwa anopfuura mashizha zvinoenderana nebhuku remushandisi,
Pakupedzisira, pinza aya maviri machira kuredhiyo yako.
Verenga zvakawanda nezve redhiyo huru iyi
IRN inzira inonakidza ye2-nzira redhiyo kutaurirana. Panguva ipi neipi, iwe unogona kuona kuti ndeapi macalligns ari online kune yakanaka QSO. Tarisa chinyorwa apa.
The S700A iri yakasanganiswa Android radio iyo inobvumidza 100% kufukidzwa: kuburikidza 3G / 4G / LTE / WiFi / VHF kana UHF FM analog uye DMR Tier II. Iwe unogara uchibatanidzwa.
Zello paInrico T192 isina radio redhiyo
Nhau dzinonakidza kune vanofarira network redhiyo! Inrico akatanga iyo T192, yakagadziridzwa vhezheni yeiyo T199.
Kunyangwe ini ndiri mukuru fan weiyo T199 ndinofanira kubvuma iyo T192 kwaive kufamba kwakanaka.
Ini ndichatanga nedhizaini. Chimiro chakakona, ichiyeuchidza maratidziro akakurumbira e Motorola. Ini ndaigara ndichiwana iyo T199 yakanyanya kudiki, ichindiyeuchidza walkie-talkie yevana. Iyo T192 inorema, gobvu, uye pamusoro pazvose, iri IP54, kusiyana neiyo T199.
Kupa kumwe kuchengetedzeka, bhatiri rine rakavhara rayo (ndinofungidzira kuti ungango bvisa bhatiri netsaona kunyangwe usingashandise iyo yechipiri locker). Idzi diki diki dzinoita kuti T192 radhi yakanyarara!
Iwo odhiyo, senguva dzose inogona kuiswa kune chaiyo chaiyo vhoriyamu, uku ichichengetedza inozara-izere yekutaura kurira. Ndine chokwadi chekuti redhiyo inozotengesa zvakanyanya.
Sezvaungave iwe uchiziva, mawairesi aya akavakirwa kushandiswa kwehunyanzvi uye kumhanya masevhisi sePTT4U. Saka ivo havadi kuti vashandisi vavhiringidze pamwe nezvirongwa uye nekuisa zvisingadiwe maapplication. Nezvakadai, pane iyo T192, Inrico akabvisa socket yeUSB saka "akajairika" mushandisi aisazoita chero shanduko mukugadzirisa.
Iyo USB ichiripo, kunyangwe yakavanzwa. Iwe unofanirwa kubatanidza diki 5-pini adapta (Inosanganisirwa netambo yeprogramu) uye gadzira kumisikidza redhiyo, uchishandisa TotalControl software.
Ese maratidziro enetiweki anofanirwa kuitwa kuburikidza ne mic / earphone zvigadziko, uchishandisa iyo programming tambo Iwe unozoda izvi Software uye Vatyairi veUART kuishandisa.
kubva V4.14, Zello is 100% inoenderana neT192. Iwe unogona kuchinja vhoriyamu, shandisa iyo PTT bhatani uye sarudza chiteshi uchishandisa dial dial knob. Iwe unongofanirwa kutevera iyo matanho ekugadzirisa yakaburitswa naZello.
Ndekupi kwekutenga iyo T192?
Odha yako T192 pano
Kuvandudza / kugadzirisa kweyakajairwa maikorofoni yeInrico TM-7
Kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana ndakaudzwa kuti modulation ye yangu TM-7 zvaive kufadza.
Pane izvi ndakafunga kutsiva maikorofoni yakajairwa (yemukati) neyemagetsi maikorofoni.
Kuti urege kuremedza iyo TM-7 Kuwedzera, ndakafunga kusaburitsa magetsi anodiwa kubva pachigadzirwa (kuburikidza neyekuisa maikorofoni) asi kushandisa simba rekunze remagetsi maikorofoni.
1 - Nhatu tambo electret maikorofoni (netambo yakaparadzaniswa)
1 - Bhatani sero bhatiri
1 - Bhatani sero rinobata
Ini ndakabatanidza maikorofoni nyowani zvinoenderana nemufananidzo uri pazasi.
Mushure mekuyedza kwakawanda kweQSO bvunzo, iyo gadziriso inoratidza kuve kuvandudzika kukuru pamamiriro akajairwa. Modulation inonzi yakanaka uye izere uye haina kupinza futi.